The Ab Presents Nepal » बेवास्ता नगर्नुहोस् यस्तो संकेत देखिएमा तपाईलाई अत्याधिक धनलाभ हुन्छ , हेर्नुहोस् १८ संकेतहरु | मातालाइ देख्नेबित्तिकै १ सेयर गर्नुहोस!
बेवास्ता नगर्नुहोस् यस्तो संकेत देखिएमा तपाईलाई अत्याधिक धनलाभ हुन्छ , हेर्नुहोस् १८ संकेतहरु | मातालाइ देख्नेबित्तिकै १ सेयर गर्नुहोस!
बेवास्ता नगर्नुहोस् यस्तो संकेत देखिएमा तपाईलाई अत्याधिक धनलाभ हुन्छ , हेर्नुहोस् १८ संकेतहरु | मातालाइ देख्नेबित्तिकै १ सेयर गर्नुहोस
१८.यदि कोही सपनामा टाउको कन्याउँदै गरेको देखियो भने त्यसकै कारण पैसा मिल्न सक्छ । यदी आँखा कन्याउँदै गरेको देखे भने पनि पैसा मिल्न सक्छ । सपनामा गाडेको धन देखियो भने पनि सम्पत्ति वृद्धि हुन सक्छ ।
हिन्दु धर्ममा हरेक देवताको निश्चित चिह्न, पदार्थ, फूल, विरुवा, पात, खानेकुरा, चरा, जनावर सम्बन्धित भएको देखाएको छ । यो सम्बन्धको विशेष महत्व छ । यी सम्बन्धित कुरा शुद्ध र पवित्र पनि मानिन्छ । यसले देवीदेवतालाई प्रशन्न पार्ने काम पनि गर्छ । लक्ष्मीलाई मनपर्ने पनि बिभिन्न चिज छन् :
लक्ष्मीलाई कमलको फूल निकै नै मनपर्छ । लक्ष्मीको आफ्नो आसनमा मात्र होइन दुवै हातमा कमलको फूल हुन्छ । यसैगरी कमलको कोपिलालाई माला बनाएर लगाएको तस्बिरहरुमा देखिन्छ । यसै कारण कमलको फूललाई पवित्र मानिन्छ । लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने सबैभन्दा ठूलो चिज कमलको फूल नै हो ।
यन्त्रहरुमा श्रीयन्त्रलाइृ सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । श्रीयन्त्रमानै लक्ष्मीले वास गर्छिन् । श्रीयन्त्रनै लक्ष्मीको शक्तिको मूल स्रोत हो । त्यसैले श्रीयन्त्र जहाँ हुन्छ ,त्यहाँ लक्ष्मीले वास गर्छिन भनिन्छ ।
देवी कमलालाई लक्ष्मी स्वरुप मानिन्छ । कमलालाई छुट्टै देवी पनि मान्ने गरिएको छ । कमलाको वाहन सेतो हात्ती हो । यही कारणले लक्ष्मीले सेतो हात्ती चढ्न मनपराउँछिन् भन्ने भनाई छ ।